Ambongadiny COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette Corona Virus Rapid Test Kit mpanamboatra sy mpamatsy | Hẻo
Telefaona / Whatsapp / Wechat: 008618157136026 Tel: +86 57186162857
Mailaka: vic@heolabs.com Mailaka: ivy@heolabs.com
Kasety fitsapana haingana an'ny COVID-19
Cassette fitsapana haingana ny areti-mifindra
Fitsapana iray amin'ny dingana HCV (Bl ...
Kasety fitsapana haingana HCV / Str ...
COVID-19 IgG / IgM Fitsapana haingana ...
OEM / ODM mpanamboatra Corona ...
1. [Fampiasana an-tsokosoko]
Ny COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette dia immunoassay mikoriana any aoriana izay natao hamantarana ny antigén nukokaridia SARS-CoV-2 ao amin'ny swab nasofaryngeal sy swab oropharyngeal avy amin'ireo olona izay ahiahiana COVID-19 avy amin'ny mpitsabo azy ireo.
2. [FITONDRANA SY FAHATONDRANA]
Tehirizo toy ny fonosana ao anaty paosy voaisy tombo-kase amin'ny mari-pana (4-30 ℃ na 40-86 ℉). Ny kit dia miorina ao anatin'ny vanim-potoana lany daty natonta amin'ny labeling.
Vantany vao nosokafana ilay paosy dia tokony hampiasaina ao anatin'ny adiny iray ny fitsapana. Ny fihanaky lava amin'ny tontolo mafana sy mando dia miteraka fahasimban'ny vokatra.
LOT izy ary ny daty lany daty dia natao pirinty tamin'ny fanoratana.
3. Fanangonana ohatra
Sampona Swab Nasopharyngeal
Atsofohy boribory amin'ny lambam-baravarana (tariby na plastika) amin'ny alàlan'ny vavorona mifanila amin'ny lanilany (tsy miakatra) mandra-pifanatrehana ny fanoherana na ny halavirana dia mitovy amin'ilay avy amin'ny sofina ka hatrany am-bavoron'ilay marary, izay manondro ny fifandraisany amin'ny nasopharynx. Ny savony dia tokony hahatratra ny halavany mitovy amin'ny halavirana amin'ny vavorona ka hatrany amin'ny fanokafana ivelany ny sofina. Mikosoka moramora sy mihodina ilay savony. Avelao ny fehin-kibo amin'ny toerana mandritra ny segondra maromaro handraisana tsiambaratelo. Esory moramora ny swab mandritra ny fihodinana. Ny specimens dia azo angonina amin'ny andaniny roa amin'ny alàlan'ny swab iray ihany, saingy tsy ilaina ny manangona santionany avy amin'ny andaniny roa raha feno ny tsiranoka avy amin'ny fanangonana voalohany ny minitip. Raha miteraka fahasarotana amin'ny fividianana ny santionany amin'ny vavorona iray ny septum na fanakanana diso, dia ampiasao io savony io ihany mba hahazoana ilay santionany amin'ilay vavorona hafa.
Sampona Swab Oropharyngeal
Atsofohy ao anaty faritra faratampony sy faritry tonsillar. Atsofohy ny andry roa amin'ny vatan'ny tonsillar sy ny oropharynx any aoriana ary aza ialana amin'ny lela, nify ary siligaoma.
Taorian'ny nanangonana ny santionany Swab, ny swab dia azo tehirizina amin'ny reagent amin'ny fitrandrahana omena miaraka amin'ny kit. Azo tehirizina ihany koa amin'ny alàlan'ny fandentehana ny lohan'ny swab ao anaty fantsona misy 2 ka hatramin'ny 3 ML ny vahaolana fitehirizana ny otrik'aretina (na ny vahaolana saline isotonic, ny vahaolana amin'ny kolontsaina na ny buffer fosfat).
1. esory ny saron'ny reagentin'ny fitrandrahana. Ampidiro ao anaty fantsom-pitrandrahana ireo reagentana fitrandrahana santionany, ary apetaho amin'ny toeram-piasana.
2. Ampidiro ao anaty fantsona fitrandrahana izay misy reagentin'ny fitrandrahana ny santionany swab. Ahodino, fara fahakeliny, ny fehin-kibo, isaky ny in-5, rehefa manindry ny loha amin'ny ilany sy amin'ny faran'ny fantsona fitrohana. Ajanona ao anaty fantsona fitrandrahana mandritra ny iray minitra ny savony.
3. esory ny fehin-kibo ary apetaho ny sisin'ny fantsona mba hamoahana ilay ranoka amin'ilay savony. Ny vahaolana nalaina dia hampiasaina ho andrana amin'ny andrana.
4. ampidiro mafy ao anaty fantsona fitrandrahana ny tendron-drano iray.
1.Avelao hifanaraka amin'ny mari-pana (15-30 ℃ na 59-86 ℉) ny fitaovana fanandramana alohan'ny fitsapana.
2. Esory ny kasety fanandramana ao anaty paosy voaisy tombo-kase.
3. Atsaharo ny fantsom-pitrandrahana santionany, mitazona tsara ilay fantsom-pitrandrahana santionany, afindra 3 (mitete eo ho eo amin'ny 100μL) ho an'ny santionany tsara (S) amin'ny kasety fitiliana, avy eo atombohy ny timer. Jereo eto ambany ny sary.
4. Miandrasa hiseho ny tsipika miloko. Adikao amin'ny 15 minitra ny valin'ny fitsapana. Aza mamaky valiny aorian'ny 20 minitra.
[INTERPRETATION ny valiny]
Tsara: * Misy tsipika roa miseho. Ny tsipika miloko iray dia tokony ho any amin'ny faritra fanaraha-maso (C), ary ny tsipika miloko hafa mifanila dia tokony ho ao amin'ny faritra fitsapana (T). Tsara ho an'ny fisian'ny antigene nucleocapsid SARS-CoV-2. Ny valiny tsara dia manondro ny fisian'ny antigène viral fa ny fifandraisan'ny klinika amin'ny tantaram-paharetan'ny marary sy ny fampahalalana diagnostika hafa dia ilaina mba hamaritana ny toetoetran'ny otrikaretina Ny valiny tsara dia tsy manilika ny otrikaretina bakteria na ny aretina miaraka amin'ireo viriosy hafa. Ilay mpitsikilo hita dia mety tsy ny antony voafaritra amin'ny aretina.
Ratsy: Misy tsipika miloko iray ao amin'ny faritra fifehezana (C). Tsy misy tsipika mipoitra ao amin'ny faritra andrana (T). Ny valiny ratsy dia sahisahy ratsy. Ny valin'ny fitsapana ratsy dia tsy manakana ny aretina ary tsy tokony hampiasaina ho fototry ny fitsaboana na fanapahan-kevitra momba ny fitantanana marary hafa, ao anatin'izany ny fanapahan-kevitra momba ny fifehezana ny otrikaretina, indrindra ny fisian'ny famantarana sy soritr'aretina klinika mifanaraka amin'ny COVID-19, na ireo izay efa mifandray amin'ny virus. Soso-kevitra ny hanamafisana ireo valiny ireo amin'ny alàlan'ny fomba fitsapana molekiola, raha ilaina, ho an'ny fitantanana marary.
Tsy mety: Tsy nipoitra ny tsipika fanaraha-maso. Ny tsy fahampian'ny habetsaky ny santionany na ny teknika tsy ara-dalàna momba ny fomba tsy mety dia ny tsy fahombiazan'ny tsipika fifehezana. Avereno jerena ny fomba fiasa ary avereno ny fitsapana amin'ny fampiasana cassette test vaovao. Raha maharitra ny olana dia ajanony avy hatrany ny fampiasana ny antsapaka ary antsoy ny mpizara anao eo an-toerana.
Previous: OEM China Dengue Elisa Test - Kasety / Strip / kit (WB / S / P) HCV haingana - HEO
Manaraka: COVID-19 IgG / IgM Cassette Test Rapid (volamena koloidaly)
Kasety fitsapana haingana an'ny COVID-19 Antigen
influenza A + B Antigen Combo Rapid Test Cassette
COVID-19 IgG / IgM Cassette Test Rapid (Colloidal ...
COVID-19 Influenza A + B Antigen Combo Fitsapana haingana ...